Ndị ọbịa oge okpomọkụ - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ọbịa n'oge okpomọkụ
Ọbịa n'oge okpomọkụ nkezi 4 / 5 si 5
NA / A, o nwere ihe nlere 14.9K
Otu ụbọchị na mmalite oge okpomọkụ, onye ọbịa na-eleta ụlọ ochie dị jụụ nke Sanwoo na-elekọta naanị ya. Onye ọbịa bịara kelee Sanwoo na mmiri ozuzo mmiri ozuzo bụ Eunje, onye ga-eketa ụlọ ochie, onye ọbịa obodo gbagwojuru anya. Igwe igwe juputara na kpakpando, agbaze nke ice cream, na ihe fọdụrụ nke ísì anwụnta nke na-ere ọkụ niile. ogologo abalị. Ndị ikom abụọ, onye ọ bụla ọzọ obi na aru na-ekpo ọkụ nwayọọ nwayọọ… A breathtaking ncheta nke a okpomọkụ na '90s.
Lovehụnanya Gị Bụ Sweetgha Sweetgha Gị
Kimi Rịba ama